Tunisia iminyaka eminingi kuyinto umholi phakathi izivakashi Russian. Basuke bakhangwa ngamanani aphansi, amahhotela yesimanje kanye izinga ezinhle ezihlinzekwa. Abavakashi bayokwazisa olunesihlabathi, ulwandle ecacile blue kanye ezikhangayo eziningi kuleli zwe. Монастир . Ihhotela Sentido Rosa Beach 4 * (Tunisia) itholakala ku-resort engabizi Monastir. It ukhethwa izivakashi abafuna uphumule ogwini engcono yezwe ngesikhathi intengo imali.
ulwazi olujwayelekile mayelana eziyinkimbinkimbi: usuku ukuvulwa, indawo
Ukwakhiwa ihhotela laqedwa ngo-1995. Kusukela ngaleso sikhathi, njalo ngonyaka ithola izivakashi kokubili ebusika kanye nasehlobo. Сканес , которая является частью Монастира . Itholakala engxenyeni esenyakatho endaweni izivakashi Skanes, oyingxenye Monastir. Sentido Rosa Beach 4 * itholakala ogwini endaweni yangasese, ngakho eya elwandle ezivakashini kuthatha imizuzu embalwa kuphela. Esikhumulweni sezindiza esiseduzane nalo eliseduze. A kude nendlu 2 km. Kuzothatha uhhafu kuphela ihora ukuya ehhotela. Монастира - в 3 км. A yezitolo ezinkulu elingamamitha 200 kude futhi isikhungo Monastir - 3 km. Umuzi Ungahambisa noma ngebhasi noma ngetekisi.
Lesi sakhiwo ezine storey, yakhiwa kuleli isitayela Oriental, isendaweni indawo enkulukazi 47.000 metres square. m. Luhle iholidi ukhululekile nomndeni wakho. Kukhona lula ukuba izihambi abanale ukuhambisa ngesihlalo sabakhubazekile. Izivakashi nezilwane kungukuthi ezibekwe lapha. был обновлен. Ngo-2009, Sentido Rosa Beach 4 * (Tunisia, Monastir) ibuyekeziwe. Thina elilungisiwe amakamelo ehhotela, kanye lounge ezivamile, izitolo zokudlela nezindawo zokuphuza.
Amagumbi: induduzo imishini
Ihhotela ubhekwa izivakashi eziyinkimbinkimbi esikhulu, ngoba inikeza izivakashi 400 amakamelo kahle esimisiwe. Ziyakwazi efanelekayo yokuhlala olulodwa futhi yokuhlala wonke umndeni. 3 amakamelo anamafektri abantu elinganiselwe ngokwenyama: lemigubazi ububanzi, eshaweni ekhethekile, usinki, ibekwe ezingeni eliphansi. Abasebenzi of the amakamelo ehhotela bahlanza nsuku zonke. белье один раз в неделю. Bakhuluma nabobani udoti, bashanele iphansi, Sula uthuli izingubo kanye ngesonto. Amafulethi isici namafasitela amakhulu futhi balcony ezibheke ulwandle, ichibi noma engadini ezungeze ehhotela.
Isisetshenziswa amakamelo azinake kakhulu. Nakanjani abe screen TV flat, okuyinto osakaza eziningi nqampuna iziteshi. мини-баре , который предоставляется бесплатно. Cool iziphuzo basesimweni mini-bar, okuyinto etholakala mahhala. Kodwa ukusebenzisa ibhokisi idiphozi ukuphepha ngemali eyengeziwe. Kuyoba usizo kulabo zezivakashi besaba ukuhamba eziyigugu egumbini. Ngokuba imini nobusuku ngenxa nokuphathwa Sentido Rosa Beach Ihhotela 4 * (Monastir), kanye izingcingo ikhaya efulethini itholakala eqondile Ukudayela ucingo. Ngo nenkathi lapho Tunisia igcina kushisa, amakamelo zihlanganisa air conditioning. Abaluthathi lokushisa cool efanelekayo ubuthongo ukhululekile futhi ukuphumula. Indlu yangasese nakanjani baye bagcwalisa iqoqo izesekeli yezimonyo, futhi izinwele dryers.
Ezokudla ehhotela: zokudla, nemishayo, imenyu yangasese
большинство других отелей Туниса, Sentido Rosa Beach 4* ( Монастир ) предлагает туристам популярную концепцию "все включено". Njengezinye amahhotela kakhulu Tunisian, Sentido Rosa Beach 4 * (Monastir) inikeza izivakashi umqondo ethandwa "zonke okufakayo". Kuhlanganisa hhayi kuphela ukudla main, kodwa futhi kwasekuseni ngasekupheleni, Ungadla ukukhanya imigoqo nezindawo zokudlela ezinhle, kanye iziphuzo ezidakayo nezinto zokuhlanza non-utshwala akhiqizwa Tunisia. Futhi amaholide kanye ngesonto ungavakashela yokudlela, ukukhonza izivakashi zalo kumamenyu. Ziyakwazi nsuku zonke evulekile kusukela 10:00 kuze kube phakathi kwamabili. Uma wayefisa, izivakashi Ungathenga isiphuzo futhi ngemva kwalesi sikhathi, kodwa kuphela imali. Izivakashi angacela imenyu wokwehlisa umzimba.
Izivakashi ngaphandle kokushiya ngezizathu ehhotela Lingase lizwakale hhayi kuphela wendawo, kodwa futhi Italian kanye cuisine ngamazwe. Ngaphezu yokudlela main, umsebenzi eziyinkimbinkimbi elandelayo iIgama:
; umthamo bar;
; yokwamukela izivakashi bar;
Services: ingqalasizinda yendawo kanye service
Isakhiwo linikeza izivakashi zayo yokuhlala hhayi kuphela ukhululekile, ukudla okunhlobonhlobo ezihlwabusayo, kodwa futhi ingqalasizinda athuthukile. Ihhotela Sentido Rosa Beach 4 * selikhanyise konke okudingayo ukuze uthole ikhwalithi nokungcebeleka. Izivakashi bayokwazisa izindawo ingqalasizinda ezilandelayo kanye namasevisi:
Inthanethi, okungase exhunywe ngemali ethile. Ungasebenzisa futhi enkompolo khulula, esemgwaqweni endaweni yokwamukela izivakashi jikelele.
A yezitolo esincane esisogwini ehhotela. Kudayisa imigexo, izingubo, izicathulo, nasemazweni angaphandle iziphuzo ezidakayo, izinto eziyizikhumbuzo ukudla kanye namaphephandaba.
yokupaka ephephile, lapho izivakashi ungakwazi park mahhala. Lapho isicelo, imoto eziqashisayo kungenziwa ikhishwe.
ATM imali ukuhoxa amakhadi esikweletu, kanye exchange.
3 amagumbi omhlangano okungase ihlelwe nezethulo, imihlangano ibhizinisi, izingxoxo kanye amadili. Lowo enkulu yokuhlala abantu 500.
Designated Ukubhema Area. Ukusebenzisa imikhiqizo kagwayi esizeni, kanye emakamelweni is nhlobo.
Yokuwasha. Kule ndawo ungathatha izinto Ilondolo mahhala.
Izinwele nobuhle salon.
Nezokungcebeleka: beach, amachibi okubhukuda nokuzijabulisa
Inhlangano yokuzilibazisa ehhotela umelwe ezingeni eliphezulu kakhulu. Izivakashi inikeza lolwandle endaweni yangasese, okuyinto has a yokungena elula kolwandle. ukujula Ukhululekile kuyivumela ukubhukuda kokubili abadala kanye nezingane. A cwilisa aqabulayo sezulu esishisayo, futhi unga echibini ongaphandle, okuyinto ugcwele amanzi ahlanzekile. Eceleni ithala futhi kuhlanganisa izambulela mahhala futhi omatilasi. Ibhishi amathawula ikhishwa kuphela idiphozi. Ngo sezulu esibi e-Sentido Rosa Beach Thalasso futhi Spa 4 * pool zasendlini. Ngesikhathi sebehlezi ogwini liyisikhungo imisebenzi amanzi lapho izivakashi zingathola ukuqasha impahla windsurfing, motor izikebhe, catamarans ngisho yezikebhe. гидроскуторе , заняться парасейлингом . Ukuze uthole imali eyengeziwe, ungakwazi ukugibela banana isikebhe, gidroskutore, Awe-Parasailing. Abenzi be-animation ahlele umdlalo omkhulu polo yamanzi ne-volleyball.
On-site yemidlalo. Lapha, kusihlwa ukuzijabulisa bukhoma. Izingane kanye nabantu abadala bayojabulela neazartnye Slots futhi yaba imidlalo. Ngemidlalo abathanda ihhotela anemisila zokudlala umdlalo we amabhiliyade, football mini, ithenisi kanye aerobics amakilasi.
Kukholakala ukuthi ukuma we ehhotela Sentido Rosa Beach 4 * - kuyinto umndeni iholide elinokuthula. Ukuze abahambi nezingane ezincane banikwa isaphulelo ezinhle. Ukuze uthole sikukhokhise inhlawulo, uhlaka kungenziwa zilethwe egumbini. Zonke zokudla nezindawo zokudla anemisila okuhlalwa kuzo ukuze ancele, okuyinto izivakashi ungasebenzisa mahhala.
Ezokuzijabulisa izingane ehhotela impela eningi. Kukhona izingane 'egwedla pool "- ichibi engajulile ngamanzi ahlanzekile. Futhi, abazali bangasebenza komntwana imidlalo Igumbi, okuyinto has a lezincwadi, ukuzijabulisa nabanengqondo imidlalo, upende, amapensela begodu amakhrayoni. мини-клуб . Ukuze ezineminyaka engaphezu kwe-5 nsuku zonke mini-club. Nakuba izingane ziyadlala ke, abazali abangayenza ibhizinisi labo. Futhi inikeza ngamasevisi yayo umhlengikazi.
Izibuyekezo lezivakashi echaza isithunzi
Монастира располагается множество отелей. Ensimini ka Monastir nazo amaningi amahhotela. Indlela ukukhetha omunye engcono? Eyokuqala ukufunda okuvelayo izivakashi eholidini. Sentido Rosa Beach 4 * uthola Izibuyekezo kakhulu. Izivakashi zehhotela uqaphele izinzuzo ezilandelayo:
Abasebenzi ngamukelekile kakhulu futhi benobungane. Ayikho ukungayinaki izivakashi okhuluma isiRashiya. Isakhiwo has a Umhlahlandlela ohlale bakutshele ukuthi bayaphi, lapho ukuthenga izinto eziyizikhumbuzo ezishibhile nokunye. D.
A ukudla okunhlobonhlobo. Esikhathini yokudlela nsuku zonke bapheka entsha, kuhlanganise inyama eyosiwe, inhlanzi kanye amakhono endawo. Akukho isifiso ukuvakashela izindawo esikhokhelwayo, ngoba yokuntuleka kokudla ehhotela.
шоу-программы . Ihhotela has iqembu elikhulu Animators ngubani ahlele ukushaja gay, i-volleyball, kusihlwa imibukiso. Nokho, kungukuthi ebekiwe.
Ngesikhathi sebehlezi ogwini eziningi khulula ilanga loungers, ngakho asikho isidingo sokuthi uthathe indawo ekuseni.
Kuyinto ikakhulukazi imibhanqwana liphumula baseNgilandi naseJalimane, ngakho leli hhotela Kuhle, akukho izinkampani intsha udakiwe.
Izibuyekezo lezivakashi echaza amaphutha
Ngeshwa, akukho ihotela enhle. Ngakho, ngaleso Sentido Rosa Beach 4 *, ngokubona izivakashi, kukhona abanye amaphutha amancane. Ngo ekubonayo izivakashi ukuchaza nebubi ezifana yehhotela:
Isikhumulo sezindiza itholakala esondelene kakhulu ehhotela, ngakho kwesinye isikhathi kungasebenza ezindizeni ungakwazi ziqhumise away.
Ekuseni ogwini eziningi ulwandle ulwelwe, okuyinto emini abasebenzi ehhotela ahlanzekile. Kodwa ekuseni ngoba abazi uzibixe elangeni lapha.
Ngezinye exchange umlawuli ikhipha irisidi, esidingeka esikhumulweni sezindiza lapho izwe lakubo.
Izintombi zasemizini kungaba ukuntshontsha imali nezinto eziyigugu, ngakho udinga ukushiya nabo ephephile.
Amagumbi ukuhlanza ezimbi. On ifenisha kuyinto nothuli oluningi, futhi emphemeni isebujameni ngokunganaki.
Oweta e yokudlela njalo unxuse tip for iyiphi isevisi.
Akufanele yini ngenze ukuphumula lapha?
Isakhiwo Sentido Rosa Beach 4 * isithombe, okuyinto ungabona kulesi sihloko, siya okuningi wokudumisa. Ngakho-ke, kungashiwo Kunconywa yokuzilibazisa ngezinga elingakanani. Ihhotela akakwazi ngokuthi ibhajethi, kodwa izindleko imvume olungisisa izinga lenkonzo. Lapha uthanda izivakashi nezingane ezincane, abalandeli ulwandle ehlanzekile engajulile, kanye nabantu abadala abafuna indawo ethule ukuze baphumule.
Park ezikhangayo izingane eMoscow. Izikhangibavakashi e-Enea. ezikhangayo Indoor izingane eMoscow